Nepali Rajneeti | कोरोना लागेकालाई ५ देखि १० दिनको समय ‘क्रिटिकल’
बैसाख २०, २०७८ सोमबार २१३ पटक हेरिएको
सातौं दिन पासा पल्टियो। ज्वरो र रुघाखोकी केही नभए पनि ‘अक्सिमिटर’ ले सामान्यभन्दा कम आंकडा देखायो। यसबीच आफू तंग्रिन थाले पनि उनले आफ्नो औंलामा अक्सिमिटर च्यापेर शरीरको अक्सिजन मात्रा नाप्न छाडेका थिएनन्। यही उनका लागि सबभन्दा हितकर साबित भयो।
हालै अमेरिकी अखबार न्यूयोर्क टाइम्सले यसबारे लामो रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ। विभिन्न अस्पतालका सरूवारोग विशेषज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको उक्त रिपोर्टको सारांश माथि उल्लिखित कीर्तिपुरको घटनासँग मिल्दोजुल्दो छ।
‘खासगरी वृद्धावस्थाका बिरामी र उच्च रक्तचाप, मोटोपना धेरै भएका वा मधुमेहका बिरामीमा त पाँचदेखि १० दिनको समय झनै चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ अल्बर्टा विश्वविद्यालयका सरूवारोग विशेषज्ञ डा. इलान स्वार्चलाई उद्धृत गर्दै न्यूयोर्क टाइम्स लेख्छ, ‘युवा उमेरका बिरामीमा पनि पाँचौं दिनपछि समस्याले गम्भीर रूप लिएको पाइएको छ। यस्तो अवस्थामा १० देखि १२ दिनसम्म नै कठिन हुनसक्छ।’
न्यूयोर्क विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा. लियोरा होर्विचको अनुभव पनि यस्तै छ।
‘अरू रोगमा एक साता बिरामी परेपछि अब ठिक भयो, अब सुधार होला भन्ने लाग्नसक्छ, तर कोभिडमा त्यस्तो हुँदैन,’ डा. होर्विचले न्यूयोर्क टाइम्ससँग भने, ‘यसमा एक सातापछि फेरि लक्षण चर्को भएर बिरामी चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्नसक्छ। त्यसैले, लक्षण देखिएको पहिलो साताको अन्त्य र त्यसपछि दोस्रो सातामा बिरामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। लक्षण छैन भन्दैमा कोभिडबाट निको भएँ भनेर ढुक्क हुनु हुँदैन।’
दोस्रो सातापछि पनि कोभिडका बिरामीलाई थकान र शारीरिक कमजोरी हुनु सामान्य भएको उनी बताउँछन्।
‘बिरामीको स्वास्थ्यमा सुधार आउँछ कि अझ खराब हुँदै जान्छ भन्ने कुरा ८ देखि १२ दिनमा प्रस्ट हुन्छ,’ माउन्ट सिनाइ नेशनल जुइस हेल्थ रेस्पिरेटरी इन्स्टिच्यूटका निर्देशक डा. चार्ल्स ए पाओललाई उर्द्धृत गर्दै न्यूयोर्क टाइम्स लेख्छ, ‘पहिला सुधारोन्मुख देखिएका बिरामी पनि ८ देखि १२ दिनमा गम्भीर अवस्थामा पुगेका छन्। यो बेला अक्सिजनको मात्रा कम हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने र खोकी बढ्दै जाने समस्या देखिन सक्छ।’
’नियमित अक्सिमिटर प्रयोग गरेर बिरामीको अवस्था जाँच्ने हो भने कुन बेला अस्पताल पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ। अन्यथा, घरमै राखेर डाक्टरको परामर्शमा उपचार गर्न सकिन्छ,’ डा. पाओलले भने।
त्यस्तै, जुन बिरामीमा लक्षण पनि गम्भीर थियो र अक्सिजनको मात्रा एकदमै कम भएर श्वासप्रश्वास निम्ति कृत्रिम अक्सिजन चढाउनुपरेको थियो, उनीहरूलाई राम्ररी निको हुन लामो समय लाग्न सक्छ। सेतोपाटी